तपाइको पिसाबको रङ्गले बताउँछ, तपाईँको स्वास्थ्यको जानकारी ! हेर्नुस जान्नुस
हरेक मानिस रहेर बाच्न चाहन्छ। तपाइँ हाम्रो सरिरको अंगहरुले देखाउने प्रतिक्रिया हरुबाट हामि कति स्वस्थ छौ पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यस्तै हामीले दैनिक गरिने पिसाबको रंग हेरेर पनि हाम्रो सरिरमा रोगको संकेत पत्ता लाग्दछ। बिशेष गरि पिशाबको रंग पनि अवस्था अनुसार फरक फरक हुने गर्दछ। धेरै किसिमका रोगहरु पिसाब कै मार्फत पत्ता लाग्ने गरेको छ। बिशेष गरि पिसाबको रंगको मार्फत शरिरमा रहेको हुन् सक्ने रोगको संकेत बारेमा केहि जानकारी चेतनाका लागि दिने जमर्को गरेका छौ ।
यदि तपाईको पिसाबमा बढी फिज देखिन थाल्यो भने सायद तपाइको खानामा प्रोटिनको मात्रा बढि भएको पनि हुन् सक्छ। सँधै जसो पिसाबमा धेरै फिंज देखिन थाल्यो भने तपाइँहरु चिकित्सकलाई सम्पर्क गरि जाच गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
रंग बिहिन पारदर्शी पिसाब
यदि तपाईको पिसाब रंग बिहिन पारदर्शी आउछ भने यो पनि राम्रो संकेत होइन । यसको अर्थ तपाईले धेरै पानी पिउँनु भएको छ र पानीको मात्रा घटाउँनु पर्ने भएको छ । कतिपयलाई के भ्रम छ भने पानी झै रंगहिन पिसाब हुनु राम्रो कुरा हो तर यो गलत हो । किनकि, भनाई नै छ अतिले खति गर्छ । पिसाब सामान्य अवस्थामा पिसाब जस्तै हुनु पर्छ । एकदमै बढि पानी पिउँदा किड्नीले रगत छान्न पाउँदैन र रगत शुद्ध हुन समस्या हुन्छ ।
यदि तपाइको पिसाब फिक्का पराल रंगको आउने गर्छ भने तपाइको स्वास्थ्य ठिक छ भन्ने मान्न सकिन्छ । यो रंगको पिसाबले राम्रो संकेत गर्छ र पानीको मात्रा पनि ठिक्क छ ।
यदि तपाइको पिसाब महको जस्तो रंगको आउछ भने बिशेष ध्यान दिनु पर्दछ। तपाईको शरिरमा पानीको अभाव भएको छ । तपाइले प्रशस्त मात्रामा पानी पिउँनुपर्दछ।
खैरो जाँड रंग पिसाब
यदि तपाईको पिसाब खैरो जाड रंगको आउने गर्छ भने तपाइको कलेजोमा समस्या भएको संकेत पनि हुन सक्छ अथवा नीर्जलिकरण भएको हुन सक्छ । आबस्यक जाच गरेको राम्रो हुन्छ र तपाइले प्रशस्त पानी पिउँनु बेस हुन्छ।
फिक्का गुलाबी पिसाब
कुनै पनि बेला तपाईको पिसाब फिक्का गुलाफी रंगको आएको खण्डमा तपाइको मृगौलाको समस्या भएको संकेत समेत हुन सक्छ । त्यसैले सकेको छिट्टो तुरुन्तै अस्पताल गइ चिकित्सकसंग जाच गरेको राम्रो हुन्छा।
सुन्तला रंगको पिसाब
सुन्तला रंगको पिसाबले दुइवटा कुरा संकेत गर्छ । पहिलो, तपाइको शरीरमा पर्याप्त पानी पुगेको छैन। या दोस्रो कारण , तपाईको कलेज खराब भएको समेत हुन सक्छ । तुरुन्तै चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोला।
हरियो अथवा निलो रंगको पिसाब
यस्तो रंगको पिसाब आउँनु दुर्लभ अनुवांशिक समस्या पनि हुन सक्छ । आफ्नो परिवारमा अरु कसैलाई यस्तो भएको थियो कि थिएन भनेर सोधिखोजी गर्नुहोस् । कुनै व्याक्टेरियल इन्फेक्सन वा औषधीका कारणले पनि यस्तो हुन सक्छ । सकेको छिटो चिकित्सकसँग सल्लाह लिनु उचित हुन्छ ।
Previous Article नेपाल आइडलका सागर आलेले यसरि मनाए आफ्नो जन्मदिन ( भिडियो सहित )
Next Article युएइमा बैदेशिक रोजगारीको अवसर ! G4S Security – ८७ हजार सम्म | डिमाण्ड हेर्नुस